November 6, 2020 - Padaethar
ချစ်သူ ကောင်လေးကို အပိုင်ချုပ်ကိုင်ထားနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
November 6, 2020 by Padaethar
ချစ်သူ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို အပိုင်ချုပ်ကိုင်ထားနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ ချစ်သူရည်းစားတွေရဲ့ဘဝ မှာအရေးကြီးဆုံး အချက်ကတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြည့်အဝနားလည်ပြီး သစ္စာရှိဖို့ဖြစ်တယ်။ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ အရေးကြီးဆုံးထဲက တစ်ခုကတော့ ချစ်သူရဲ့ စိတ်တွေကို အပြည့်အဝ ချုပ်ကိုင်ထားနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေက ထိန်းချုပ်တာတွေ၊ ချုပ်ချယ်တာတွေ မကြိုက်တဲ့အတွက် မသိသာတဲ့ နည်းလေးနဲ့ ဘယ်လိုချုပ်ကိုင်ရမလဲဆိုတာကို ပြောပြပါမယ်။ (၁) အရမ်း မချီးကျူးပါနဲ့ ယောက်ျားလေးတွေကို မလိုအပ်ပဲ အရမ်း မချီးကျူးပါနဲ့။ မဟုတ်ရင်သူတို့က သူတို့ကိုသူတို့ ဟုတ်လှပြီထင်ပြီး အရမ်းတွေ ဘဝင်လေဟပ်သွားတတ်လို့ပါ။ ဒါကြောင့် သူတို့ တစ်ခုခုလုပ်ရင်လည်း မဆိုးပါဘူး၊ ကောင်းပါတယ် လောက်ပဲပြောပါ။ နောက်ဆက်တွဲ မြှောက်ပင့်ပြောဆိုတာတွေ အရမ်းမလုပ်ပါနဲ့။ (၂) ပြောင်းလဲသွားတဲ့အကျင့်တွေကိုချီးမွမ်းပေးပါ ဥပမာ သူလုပ်လေ့မရှိတဲ့အရာတစ်ခုခုဖြစ်တဲ့ အိမ်သာဆေးတာမျိုး၊ အိမ်ရှင်းတာမျိုး၊ ထမင်းဟင်းချက်တာမျိုး တစ်ခုခုလုပ်တဲ့အခါ သူ့ကိုချီးကျူးပေးပါ။ … Read more
၁။ သူအနားမှာရှိနေရရင် ဘဝတစ်ခုလုံးပြည့်စုံနေသလို အရမ်းပျော်နေမိတယ်။ ၂။ သူနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အသေးအမွှားလေးတွေကအစသေချာ ဂရုစိုက်ပေးနေမိတယ်။ ၃။ သူနဲ့အဆက်အသွယ်မရတဲ့အခါ အရမ်းစိတ်ပူမယ်၊ သူဘာတွေလျှောက်လုပ်နေတာလဲ ဘယ်သူနဲ့ရှိနေလဲပေါ့။ ၄။ သူနဲ့စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက်ကြတိုင်း တစ်လောကလုံးက ကိုယ့်ကို ဥပေက္ခာပြုထားသလိုမျိုး ခံစားနေရတတ်တယ်။ ၅။ ကိုယ့်ချစ်သူမှားမှားမှန်မှန် သူ့ဘက်က အမြဲရပ်တည်ပေးနေတတ်တယ်။ ၆။ အဆင်မပြေတဲ့ အချိန်တိုင်းလဲ ပြန်အဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုတာ သိပေမဲ့ ပာိုတွေး ဒီတွေးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို နာကျင်ခံစားနေတတ်ကြတယ်။ ၇။ သူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေကို ခွန်းအားအဖြစ်ပြောင်းလဲအောင် ကိုယ့်က ဖေးဖကူညီပေးနေမိတယ်။ ၈။ သူများအတွက် သူက ဘာမှမပာုတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါစေ…. ကိုယ့်အတွက်ကတော့ ဘဝမှာ အရေးပါဆုံးသော လူတစ်ယောက်အဖြစ် လက်ခံထားကြတယ်။ ၉။ သူ့အပေါ်မှာ အတတ်နိုင်ဆုံး နားလည်ပေးပြီး သာယာတဲ့အချစ်တစ်ခုဖြစ်အောင် အမြဲကြိုးစားနေတတ်ကြတယ်။ Credit : momolay … Read more
နှစ်သုံးဆယ်က တခါမှားရင်အကြင်မယားဖြစ်သော်လည်း အကြိမ်ကြိမ်မှားရင်တောင်….. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သုံးဆယ်က ဘော်လီ နဲ့အတွင်းခံအပြင်ထုတ်ထားရင် ကျက်သရေမရှိဘူး၊ နှစ်သုံးဆယ်ကြာတော့ ဘော်လီနဲ့အတွင်းခံကို ဆိုင်ကြီးတွေမှာ တင်ထားရင် ခေတ်မီတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သုံးဆယ်က အင်္ကျီနဲ့ဘောင်းဘီမှာ အပေါက်နဲ့ ဖာရာပေါ်ရင် ဆင်းရဲလို့….. နှစ်သုံးဆယ်ကြာတော့ အင်္ကျီနဲ့ဘောင်းဘီမှာ အပေါက်နဲ့ ဖာရာကို ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်တာ ချမ်းသာလို့။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သုံးဆယ်က ဘဏ်မှာငွေချေးရဖို့ သင်ကအနူးအညွှတ်တောင်းပန်ရတယ်….. နှစ်သုံးဆယ်ကြာတော့ ဘဏ်က သင်ငွေလာချေးဖို့ အနူးအညွှတ်လာတောင်းပန်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သုံးဆယ်က လူတစ်ယောက်လုပ်ရင် တစ်မိသားစုလုံးစားရတယ်….. နှစ်သုံးဆယ်ကြာတော့ လူနှစ်ယောက်လုပ်တောင် ကလေးတစ်ယောက်မွေးဖို့ အနိုင်နိုင်စဉ်းစားရတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သုံးဆယ်က တက္ကသိုလ်ဖြေဆိုအောင်နိုင်ဖို့ အင်မတန်မှခက်ခဲတယ်…… နှစ်သုံးဆယ်ကြာတော့ တက္ကသိုလ်ဖြေဆို မအောင်ဖို့တောင်အင်မတန်မှခက်ခဲတယ်။ (ကိုယ့်ခေတ်က အောင်ချက်နဲ့ ကိုယ့်မိဘခေတ်က အောင်ချက် နှိုင်းယှဉ်ပြီးမှလာပြန်ပြောပါ) လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သုံးဆယ်က လူတစ်ယောက်နဲ့ မှားအိပ်မိပြီဆို သူက တစ်သက်လုံး သင့်လူပဲ…. နှစ်သုံးဆယ်ကြာတော့ … Read more
ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို အောင်မြင်အောင်ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ မိန်းမ (၁၀)မျိုး
ယောကျာ်းတစ်ယောက် အလုပ်ကိုင်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ ငယ်ရွယ်စဉ်က သူတို့ရဲ့မိခင်၊ ဖခင်တွေက အဓိကပံ့ပိုးမှုတွေ ပေးခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမဲ့အိမ်ထောင်ရက်သားကျလာတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖေါ်ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုဟာ ပိုပြီးအဓိကကျသွားပါပြီ။ ပံ့ပိုးတယ်ဆိုတဲ့အရာဟာ ငွေကြေးပိုင်းရယ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ကျန်တဲ့အချက်တွေနဲ့လည်း အများကြီးဆက်နွယ်နေပါသေးတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို အအောင်မြင်ဆုံးနေရာကို တွန်းပို့နိုင်သလို အနိမ့်ကျဆုံးဖြစ်အောင်လည်း ဆွဲချတတ်ပါသေးတယ်။ ဒီတော့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ နေရာက ဘယ်လောက်တောင် အဓိကကျတတ်သလဲဆိုတာနဲ့ ဘယ်လိုအချက်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားရမလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ ၁။ သဘောထားကြီးပြီး လူအကဲခတ်တော်တဲ့မိန်းမ သူမဟာ အင်မတန်မှ ပါးနပ်တတ်ပြီး သင်ရဲ့မျက်တတောင်တခတ်တွင်းမှာ သင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကို အကဲခတ်ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်ပြီး သင်ပျော်နေချိန်မှာ သင်နဲ့အတူပျော်ရွှင်မှုတွေကို အတူခံစားပေးတတ်ပါတယ်။ သင်မျက်မှောင်တစ်ချက်ကုတ်လိုက်လို့ ဘယ်လောက်ပဲ သင်ကပျော်ရွှင်ချင်ယောင် ဆောင်ပြဆောင်ပြ သင့်ရဲ့ဒုက္ခတွေ အခက်ခဲတွေကို ဝေမျှပြီး ခံစားနားလည် ဖြေရှင်းပေးတတ်ပါတယ်။ ၂။ ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇော်မွှေးပျံ့တဲ့မိန်းမ သူမဟာ ဘယ်လောက်ပဲ … Read more
မိန်းကလေးတွေ ပြောကြတဲ့ ယောက်ျား မပီသစေတဲ့ အရာ
မိန်းကလေးတွေ ပြောကြတဲ့ ယောက်ျား မပီသစေတဲ့ အရာ ၂၀ ခု
ယောက်ျားရဲ့ အချစ်မေတ္တာတွေ ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းဆီမှာပဲ မြဲနေစေချင်လား …
လူဆိုတာ ဘယ်အရာကိုဖြစ်စေ ကြာလေ ရိုးအီလေ ငြီးငွေ့လာလေပါပဲ။ ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို အရမ်းကြိုက်နှစ်သက်လို့ မဖြစ်မနေ၀ယ်ခဲ့တာတောင် မကြာခင်မှာပဲ ရိုးအီသွားတတ်တယ် မဟုတ်လား။ သဘောသဘာဝချင်း မတူညီတဲ့ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်အပေါ်မှာ အချိန်ကြာလာတဲ့ အခါ ရိုးအီငြီးငွေ့ လာတတ်ကြတာ သဘာဝပါပဲ။ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ ဂရုစိုက်မှုကို ပြန်လည်ရရှိလိုတဲ့ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးများအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်ရမယ့် အချက် (၇) ချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) တကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းမှု ရှိပါ ခင်ပွန်းဆိုတာ မိသားစုဝင်တစ်ဦးအနေနဲ့ အတူနေထိုင်တာ ကြာလာတဲ့အခါ ကိုယ်က သိပ်ကြီး သန့်ရှင်းလှပနေဖို့မလိုပဲ ဘိုသီဘတ်သီဖြစ်နေရင်တောင် ချစ်မယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ရေမွှေးမသုံးပဲ အပြင်ထွက်ရင်လည်း ရတယ်လို့ထင်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ သူတို့က အချစ်မပျက်တာမှန်ပေမဲ့ ဆွဲဆောင်မှုမရှိတော့တာလည်း အမှန်ပါပဲ။ စတင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတုန်းက ဘယ်လိုဆွဲဆောင်ခဲ့လဲ မိမိကိုယ်ကို ပြန်ဆန်း စစ်ကြည့်နော်။ … Read more
တစ်﻿ကယ်﻿မြတ်﻿နိုးယုယနိုင်﻿မယ့် ဥယျာဉ်﻿မှူးရဲ့ ရင်﻿ခွင်﻿ထဲက ချစ်﻿ပန်းတစ်﻿ပွင်.
အချစ်ပန်းတစ်ပွင့်….ပွင့်ခဲ့သည် သူ (Suho) နဲ့ သူမ (အိ =စာဖတ်သူ ) လွန်ခဲ့ သော နှစ်များစွာက အောက်တိုဘာလ ၏ မိုးတဖြောက်ဖြောက် ရွာသော နေ့ တစ်နေ့ တွင်ဖြစ်ပါသည်။ သူ မမေ့နိုင်သော မျက် ဝန်းတစ်စုံသည် အလင်းရောင် အနည်းငယ်ဖျော့တော့နေသော ဟောခန်းကျယ်တစ်ခု အတွင်းတွင် လက်လက် ကလေး တောက်ပနေခဲ့၏။ သူမ မျက်နှာသည် မြင်လိုက်သည်နှင့် နောက်တစ် ခါပြန် ကြည့်ဖြစ်သော မျက်နှာမျိုးဖြစ်သည်။ နုယဉ်စွာ ထူးခြားသော မျက်နှာလေးဖြစ်သည်။ ချယ်သ ထားသော အ ရောင်များကင်းမဲ့ လျှက်က ကျက်သရေတွေ ဖြိုးဝေနေ၏။ အနည်းငယ်တင်းစေ့ ထားသယောင် ရှိသော နှုတ်ခမ်း ပါးတစ်စုံသည် သူ မ၏ တောက်ပသော မျက်ဝန်း … Read more
အိမ်ထောင်ရှင်မလောင်းတွေ မှတ်​သားလိုက်​နာသင့်​​သော အချက်​များ
အိမ်ထောင်ရှင်မမတွေရော၊ အိမ်ထောင်ရှင်မလောင်းတွေရော မှတ်သားလိုက်နာသင့်သော အချက်များ- ၁။မိမိခင်ပွန်းကို ဘယ်တော့မှ မဟောက်ပါနဲ့၊ မအော်ပါနဲ့။ သူ့ကိုမရိုသေခြင်း လက္ခဏာပါ။ ၂။မိမိခင်ပွန်းရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို မိသားစုဝင်၊ သူငယ်ချင်းတွေကို မပြောပြပါနဲ့။လင်မယားဆိုတာ တစ်ဦးအကြောင်းတစ်ဦး ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ၃။အမူအရာ၊အစောင်းအမြောင်းတွေနဲ့မိမိခင်ပွန်းကို မဆက်ဆံပါနဲ့၊ (သူ ဘယ်လိုအထာ ကောက်သွားမလဲ ဆိုတာမသိနိင်ဘူး) အမြဲတမ်းပြန်ခံပြောတက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာ ပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ကို မပိုင်ဆိုင်ရကြဘူး။ ၄။မိမိခင်ပွန်းကို တစ်ခြားယောင်္ကျားတွေနဲ့ မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့။ (သူတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေအားလုံးကိုကိုယ်က မသိနိုင်ပါဘူး။) ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ မာန၊ ဂုဏ်သိက္ခာကို စော်ကားမိရင် ကိုယ့်အပေါ် သူထားတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာလည်း လျေ့ာနည်းသွားပါ လိမ့်မယ်။ ၅။ ခင်ပွန်းရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို မကြိုက်လို့ဆိုတိုင်းမလေးမစားမဆက်ဆံပါနဲ့။ သူတို့တွေကိုရှောင်ဖယ်တတ်အောင် သင့်ခင်ပွန်းအားပြောပြထားပါ။ ၆။ မိမိခင်ပွန်းက လက်ထပ်ထားသူဟာ သင့် ကိုပါ။(အိမ်အကူ ကိုမဟုတ်ဘူး။တစ်ခြားသူ ကိုမဟုတ်ဘူး)အိမ်ရှင်မတာဝန်တွေကို မိမိကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ပါ။ … Read more